ओलीले जस्तै ज्ञानेन्द्र शाहले पनि हठ गरिदिएको भए... -योहोखबर
ओलीले जस्तै ज्ञानेन्द्र शाहले पनि हठ गरिदिएको भए...
काठमाडौँ - यतिखेर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा नौटंकी चलिरहेको छ । अध्यक्षद्वय घण्टौँ लगाएर वार्ता गर्छन्, तर निष्कर्षमा पुग्दैनन् । स्थायी कमिटी बैठकको मिति सरेको सर्यै छ । चरम विवादमा परेर पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफैँले मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ भन्ने महशुस समेत छैन । राजालाई निरंकुश देख्ने दोषी आँखा र मन भएकाहरूले नेकपाको निर्लज्ज अनि नौटंकीबाजहरूलाई हेरुन् सचिवालय, स्थायी कमिटी, अझै केन्द्रीय कमिटी सर्वत्र अल्पमतमा हुँदाहुँदै पनि उनी न त पार्टीको अध्यक्ष पद छाड्न तयार छन् न त प्रधानमन्त्री पद नै । जतिबेला तपाईँहरू गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न खोज्दै नारायणहिटी खाली गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, राजा ज्ञानेन्द्रले यस्तै हठ गरिदिएको भए के गणतन्त्र सजिलोसँग कार्यान्वयन हुनसक्थ्यो ? तत्कालीन समयमा राजाले सेना पुलिसलाई प्रयोग गर्न खोजेका भए के गणतन्त्र आउँथ्यो ?
नेपालले आफ्नो संविधान जारी गरेबापत नाकाबन्दी खेपेको ज्वलन्त उदाहरण हुँदाहुँदै देशको गौरव र स्वाभिमानको रक्षा गर्दै चुच्चे नक्सा पारित गर्नु भारतका लागि टाउको दुखाइको विषय हुनु अस्वाभाविक होइन । यस्तो परिस्थितिमा ऊ कुनै हालतमा खुशी हुनै सक्दैन । नेपाल भारतको समस्या कुटनीतिको माध्यमबाट समाधान गर्ने भनेर जति फलाके पनि भारतका लागि नेपाली राजदूतले भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत प्रवेश पाएनन् भन्ने खालका समाचार नआएका होइनन् । दुवै देशको हैसियत समान हुने होइन ? हाम्रा राजदूतले भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रवेश नपाउने उनका देशका राजदूतले चाहिँ किन र केका लागि अनि कुन हैसियतमा हाम्रा सबै नेताहरूको चोटाकोठा चहार्ने हिम्मत राखेका हुन् ?
समय र सन्दर्भ नखुले पनि वर्तमान भारतीय राजदूत विनय क्वात्राको र माधवकुमार नेपालको फोटो सामाजिक सञ्जालमा देखिएको थियो । आखिर एउटा सहसचिव स्तरीय कर्मचारीसँग यो देशको पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका मानिसको कामचाहिँ के पर्ने रहेछ ? हामीले प्रश्न उठाउन मिल्ने कि नमिल्ने ? भारतीय खुफिया एजेन्सी नेपालको सरकार विरुद्धमा यतिबेला सक्रिय भएर लागेको छ भन्ने खालका समाचार आइरहेको छ । जनयुद्ध भनिए पनि धनयुद्ध भनिए पनि आतंककारी गतिविधि सञ्चालन गर्न भारतमै सेल्टर लिएर बसेका भनिएका प्रचण्डले भारतीय पूर्वजर्नल बख्शीको भनाइको प्रतिवाद नगर्नु तर नाकाबन्दीताका मधेसी दलले जस्तै नाकाबन्दी भारतले होइन हामीले लगाएका हौँ भन्ने मधेशी दल र प्रम केपी ओलीको राजीनामा भारतले होइन मैले मागेको हो भन्नुले मधेशी र प्रचण्ड भारतलाई कति हदसम्म प्रेम गर्दारहेछन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदैन र ?
यो गणतान्त्रिक व्यवस्था यस्ता पात्र र यिनका प्रवृत्तिसँग मेरो व्यक्तिगत रूपमा कुनै अनुराग नभए पनि २,२ पटक अरुको मृगौला लिएर नाफाको जिन्दगी बाँचिरहेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दल तथा भारतले आफूलाई अप्ठेरोमा पार्यो भन्दा पनि नपत्याउने हामी जनताले केका आधारमा सरकारको विरोध गर्ने ? के भारतको स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि नियुक्त गरिएका हली गोठालाहरूको प्रभावमा परेर प्रमले राजीनामा दिनुचाहिँ उपर्यक्त हुने हो ?
हामी सम्पूर्ण जनता तथा नेकपालाई चासो छ । पार्टी विवादमा यति व्यस्त छ कि प्रचण्डपक्षलाई ओलीको राजीनामा नगराई नहुने ओली पक्षलाई कुनै पनि हालतमा सत्ता छोड्नै नहुने । यतिवेला देशको समग्र समस्या बाढीपहिरोको बारेमा सोच्ने फुर्सद समेत छैन । लाग्छ अरु हाम्रो समस्या सबै निर्मूल भए अब यही एउटा विवाद मिल्न बाँकी छ । यो विवाद मिलेपछि हाम्रो मुलुक रामराज्य हुनेछ... वाह गणतन्त्र ! वाह हामी सचेत नागरिक !
नेपालमा आवधिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरौँ भनी जोड़दार माग गर्न चाहन्छु देशको अर्बौँ रकम खर्च गरेर निर्वाचन गर्ने नेपाली जनताले भोट हाल्ने प्रधानमन्त्री बनाउने अनि सरकारचाहिँ भारतले ढाल्ने हो भने यहाँ निर्वाचनको नाटक किन गरिरहने ? केपी ओली व्यक्तिगत रूपमा मलाई मन पर्नु र नपर्नुसँग कुनै अर्थ राख्दैन तर केपी ओली ३ करोड नेपाली जनताको प्रम हो । यदि साच्चैँ नै अध्यारो भित्रबाट कसैले षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिरहेको हो भने त्यसलाइ सार्वजनिक गर्नुपर्छ वा आफ्नो भनाइ फिर्ता लिनुपर्छ तर जनताको अभिमतको अपमान गर्नचाहिँ पाइँदैन ।
अस्थिर राजनीतिको बानी परेको हामी नेपालीलाई नेताहरूले गरेका हरेक जायज वा नाजायज गठबन्धन पनि प्रिय लाग्नु दुःखद कुरो हो । काठमाडौंका तीनतारे तथा पाँचतारे होटलमा नेताहरूको आवतजावत बढ्नु एवं त्यहाँ भारतीय ‘र’ का एजेन्टहरूसँगको उठबसले मुलुकलाइ राम्रो गर्दैन । नेपाललाई सधैँ अस्थिर र कमजोर बनाइरहने छ । जयराम विडारी
२३ दिन अघि २०७७ असार ३१ १२:२९ मा प्रकाशित
कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षा तत्काल नलिन बोर्डको निर्देशन